Budata MediaGet maka Windows
MediaGet, nke ga-enye gị ohere ịchọta ihe nkiri, egwuregwu na faịlụ egwu ị na-achọ ngwa ngwa na ebe nchekwa mgbasa ozi ya sara mbara, bụ onye ahịa iyi nke na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ya noge na-adịbeghị anya. Na mmemme, nke nwere interface enyi na enyi, azụmahịa nwere ike mechaa ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ị nwere ike ịhụ faịlụ ekewa ngwa ngwa na fim, egwu, egwuregwu na usoro mmemme nwere nhọrọ nzacha dị elu. Mgbe ịchọtachara faịlụ mgbasa ozi ị na-achọ, nbudata ga-amalite ngwa ngwa. MediaGet nwere ọkpụkpọ mgbasa ozi agbakwunyere iji mee faịlụ ebudatara. Site na ọkpụkpọ mgbasa ozi a, ị nwere ike ịkpọ faịlụ ebudatara nịntanetị. I nwekwara ike na-agba ọsọ ebudatara fim na music si nime mmemme.
Nihi ngwaọrụ nsuso iyi ya, ị nwere ike họrọ nbudata ngwa ngwa yana faịlụ ewu ewu. MediaGet gụnyere ọba akwụkwọ mgbasa ozi. Ị nwere ike iji faịlụ mgbasa ozi ebudatara hazie ebe nchekwa nke gị. Nchọ ọchụchọ dị elu na-enye ohere ịnweta faịlụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ nịchọrọ ịchọta faịlụ mgbasa ozi ị na-achọ ngwa ngwa wee budata ha ngwa ngwa, ị nwere ike nweta enyemaka site na mmemme MediaGet.
Kacha ọhụrụ na: 09-12-2021